Xildhibaan Bidhi oo Madaxweynaha ku Bogaadiyay Kaalinta uu ka Qaatay Mashaariic laga fuliyay Burco - Wargane News
Home Somali News Xildhibaan Bidhi oo Madaxweynaha ku Bogaadiyay Kaalinta uu ka Qaatay Mashaariic laga...
Xildhibaan Mubaarig Yuusuf Cilmi (Bidhi) oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Burco ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku amaanay wax qabadka xukuumadiisu ka hirgalisay magaalada Burco ee xarunta gobalka Togdheer.
Xildhibaan Bidhi oo hadal ka jeediyay waddo laami ah oo golaha deegaanka ee magaalada Burco iyo xukuumadda dhexe ka hirgaliyeen xaafada Sheffield ee magaalada Burco oo madaxweyne Siilaanyo saaka xadhiga ka jaray.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in gole deegaan ahaan ay madaxweynaha uga mahad naqayaan gacanta xukuumadiisu ka gaysatay hirgalinta wadadaas, oo dhererkeedu dhan yahay laba kiiloomitir, waxaanu xusay in golaha deegaanka ee degmada Burco ay yihiin kuwa ugu shaqada badan dalka.
“Halkani madaxweyne waa waddadii aad noo dhagax dhigtay ee xaafada Sheffield ee la odhan jiray October, ayaad maantana madaxweyne xadhiga nooga jaraysaa, waxaana xaafadan ugu magac darnay markii ay ina aqoon sadeen golaha deegaanka ee Sheffield,”ayuu yidhi Mubaarig Yuusuf Cilmi.
Xildhibaanku waxa kale oo uu intaasi raaciya “Madaxweyne,waa kaaga mahad naqaynaa waddadan aad nala dhistay, waxa kale oo aan u mahadnaqayaa Wasiirrada wasaaradda maaliyada iyo hawlaha oo aanay la’aantood noo suurta gasheen dhismaha waddadan. xaafadanina waa xaafada ugu ballaadhan gobalka Togdheer, waana Ohio-yada Somaliland, waana halkii madaxweyne lagaa doortay, waana halka Muuse Biixi laga dooran doono, Madaxwewne waxaanu dhisnay 24 kiiloo mitir oo laami ah, waxaana aan u malaynaa in aanu ugu shaqo badanahay goleyaasha deegaanka ee dalka.”
Somaliland: Xisbiga KULMIYE Oo War-saxaafadeed Kasoo Saaray Go’aamada Kasoo Baxay shirkii Awr-boogays
Deg Deg: Hadiin Ay Reer Puntland Buuqa Naga Deyn Waayan Garoowe Ayanu Tagi,, Faysal Oo Karbaashay Maamulka Puntland + Muuqaal